Falsan Data Recovery
Kit Paragon Samatabbixinta
Recovery File PC Isbatooraha
Maalmahan, waxaan aan ka fekeri karaa nolosheena oo aan technology, gaar ahaan iyada oo aan kombiyuutarka gaarka ah ama laptops. Kuwa qalabka awood badan waxana aynu kaydka xogta aad u muhiim ah - ka xusuus ma rabno inay iska ilaawaan in waraaqaha aad u muhiim ah oo la xidhiidha shaqo-. Mararka qaarkood, oo iyana nasiib darro ah dhacdooyinka, files kuwa aad tirtiri karaa.
Waxaa laga yaabaa inaad la tirtiro faylasha adigu by, adiga oo aan feejignaan. Ama waxaa laga yaabaa, qaraabadaada ayaa tirtiray iyaga qalad ah. Ama sababo qaarkood, wadid aad u adag ayaa noqday kharribeen. No arrinta Waa maxay sababta, waxaa jira hab aad u fudud inuu ka soo kabsado aad mahad files lumay si u soo saarayaasha digtoonaan nidaamka aad hawlgalka iyo qalab gaar ah. Marka aad ka your computer tirtirto file ah, waxa aanu aad si joogto ah la tirtiro. Waxaa si fudud u noqdo tilmaamayo u muqato. Sidaas, soo kabashada file waa suurto gal ilaa aad dooratay in ay tirtirto faylka si joogto ah ama drive ay ku adag tahay oo file waxaa loo kaydiyaa waa la wada baabbi'iyey.
Halkan waxa ku jira 10ka freewares undelete oo kaa caawin doona inaad ka soo kabsado files lumay.
Recuva waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo ugu awood badan qalab undelete lacag la'aan ah. Ka sokow taas, waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan Recuva. Waxaad si fudud u leeyihiin in ay ka jawaabaan su'aalaha kuwaas oo saaxir ah weydiiyo. Su'aalaha waa kuwa fudud; saaxir ah ku weyddiiyo oo kugu nooca faylasha aad raadinayso iyo meesha ha aad rabto in aad raadiso faylasha.
Haddii aad dareento raaxo leh, aad xitaa laga yaabaa inay isticmaalaan Advanced Mode, kaas oo bixiya fursado dheeraad ah. Recuva waa software lagu kalsoonaan karo oo si degdeg ah oo kaa caawinaysaa in aad soo kabsado ku dhowaad nooca file kasta.
Undelete 360 ​​dhab ahaantii waa freeware ka mid ah wax soo saarka ganacsiga. Taasi waa sababta muuqaalada qaar waxaa la saaray, sida shaandhaynta file. Faa'iida ugu weyn ee freeware tani waa xawaaraha. Mararka qaarkood iskaanka ku qaadan kartaa ilaa waqti badan.
Si kastaba ha ahaatee, Undelete 360 ​​waxay leedahay qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale oo waa weyn. Waa in ay soo qaado faylasha in qalabka kale ee soo kabashada inta badan ka maqnaan awoodaan. Sidoo kale, in kastoo ay tahay freeware ah aad leedahay qadarka soo kabsaday files waa xad lahayn.
Part 3 MiniTool Barzakh Recovery
MiniTool Barzakh Recovery waa freeware gaar ah u soo kabsaday files laga badiyay. Waxa aanu soo kabsado ma aha oo kaliya files in aad laga badiyay. Qalabkani waxa uu awoodo inuu ka soo kabsado Risaalo ka dhan maqan.
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo software this. MiniTool Barzakh Recovery si fudud u baahan yahay in la tilmaamay ee drive ee dhibaato, ka dibna u iskaan doonaa Risaalo ka maqan. Marka scan la dhammeeyo, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan Risaalo ka lumay waqti.
Qeybta 4 falsan Data Recovery
Falsan Data Ladnaansho macquulka ah waa mid ka mid ah qalabka soo kabashada fudud si ay u isticmaalaan. Ma jiraan wax bedeley ama fursadaha. Waxaad si fudud u dooran drive aad rabto in aad iskaan oo sugi in natiijada.
Si kastaba ha ahaatee, software this aysan horay u aqoonsan drives dibada ka yimaada sida USB drive.
Qeybta 5 PhotoRec
PhotoRec waa qalab aad u awood badan undelete. Waxay la shaqeeyaan nidaamyada file ugu waana la jaan qaada kasta oo nidaamka (DOS, Windows, OS X, Linux, iyo in ka badan).
Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo aad ka argagaxay ay interface DOS oo kale ah. Laakiin, ha ka welwelin. Inkasta oo ay u ekaan karaan dhib badan, software tani waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Iska akhriso waxa ku qoran iyo raac tilmaamaha.
Qeybta 6 FreeUndelete
Inkasta oo ay tahay software ah oo lacag la'aan ah, FreeUndelete ma aha mid aad u wanaagsan. Waa arrin aad u gaabis ah, da 'ah oo lacag la'aan ah in loo isticmaalo shakhsi kaliya. Tani waa runta marka ay timaado drives baruurta.
Laakiin, marka ay timaado NTFS drives, FreeUndelete muujisay qiimihiisu. Waxay ahayd tilmaami karo files badan tirtiray. FreeUndelete soo bandhigaysaa faylasha tirtiray in qaab-dhismeedka gal ah, taas oo si sahlan si aad u hesho files lumay.
Part 7 Kit Paragon Samatabbixinta
Waxa kale oo software free weyn undelete boggayaga liiska waa Paragon Rescue Kit. Qalabkani waxa uu aad u faa'iido badan marka aad PC ma kabaha doono oo dhan. Paragon Rescue Kit Free yimaado la image ah oo aad u gubi kara in CD. Markaas marka Musiiba ah, waxaad si fudud u boot ka CD ah.
Tani software free suurto gal kaa caawin kartaa inaad si uu u xaliyo your computer. In seenyada ay dhacdo ugu xumaa, waxaad yeelan doontaa files oo dhan badbaadiyey.
Qaybta 8 Glary Undelete
Glary Undelete waa software ah soo kabashada lacag la'aan ah aad u aasaasi ah. Waxaad si fudud u leeyihiin in ay doortaan drive ka aad rabto in ay baadhayaan oo sugi in barnaamijka dhammayn. Dhinaca xun yahay xawaaraha software-ka ee, tan iyo waa gaabis ka badan inta kale ee ka freewares ku xusan.
Inkasta oo aanay jirin taas sii dheer dad badan, dhibcaha Undelete Glary A ah ee asaaska ah.
Qaybta 9 Pandora Recovery
Pandora Recovery waa freeware weyn undelete taas oo files ka dib markii la helay.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa files ee aragtida folder Explorer-sida ama aad qalab oo Sifeeyaha faylasha magac, size, abuuridda iyo taariikhaha "modified ee la soo dhaafay".
Part 10 PC-kabashada Isbatooraha File
Recovery Isbatooraha File PC waa freeware ah oo kaa caawin kara inaad soo kabsado aad files lumay labada baruurta iyo NTFS drives. Files ayaa waxaa lagu soo bandhigay aragtida ah folder fudud.
Waa wax cajiib ah in barnaamijka ku eegaan karo files sida qoraalka ama qashin qubka hex ah, laakiin aan ku eegaan doonaa JPEGs. PC Isbatooraha File Recovery waa freeware fiican, laakiin waxaad u baahan tahay dulqaad qaar ka mid ah ka hor inta aad awoodo inaad si weyn uga faaiidaysato waxaa ka mid ah.
Oo dhan Softwares undelete hore u soo sheegnay waa kuwo wanaagsan, laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aanay awoodin in ay helaan oo soo kabsado qaar ka mid ah faylasha aad. Sidoo kale, kuwa badan oo iyaga ka mid ah waa gaabis ah oo aan si sahlan ay u isticmaalaan. Wondershare Data Recovery waa aalad awood iyo xirfad leh, taas oo aad si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa soo kaban karto, ku dhowaad dhammaan faylasha aad, ka drive wax.
Software waa mid aad u fududahay in la isticmaalo, iyo in aad leedahay Wizard ah in ay kuugu toosin lahayd nidaamka dib u soo kabashada. Ma aha in aad wax u sameeyo, ka sokow dooranin drive (ama iskaan kartaa dhammaan drives) iyo fayl ah nooca (ama doorato noocyada file oo dhan). Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Data Recovery lacag la'aan ah, ka ay website-ka .
Software Noocyada File taageerayaan Speed Qalabka ay taageerayaan Ajandooyinka Price
Recuva Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS iyo baruurtii Windows Free
Undelete 360 Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS Windows Free
MiniTool Barzakh Recovery Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Speed ​​Celceliska NTFS Windows Free
Falsan Data Recovery Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Speed ​​Celceliska NTFS Windows Free
PhotoRec Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS Windows, Linux, OS X Free
FreeUndelete Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS Windows Free
Kit Paragon Samatabbixinta Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS / Td> Windows Free
Glary Undelete Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Gaabis ah NTFS iyo baruurtii Windows Free
Pandora Recovery Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Fast NTFS Windows Free
Recovery File PC Isbatooraha Ku dhawaad ​​kasta Document, Image iyo Video File Type Gaabis ah NTFS iyo baruurtii Windows Free
Wondershare Data Recovery Kasta Aad Fast Ku dhowaad qalabka oo dhan Windows, OS X Trial Free / $39.95 Lifetime License
> Resource > Free > Top 10 Undelete Freewares inuu kaa caawiyo inaad Ladnaansho Khasaaray Files